HOME | Chin News Journal
by CNJ	 February 11, 2021 February 11, 2021
ဟားခါးတွင် သက်ငယ်မဒိန်းမှုကျူးလွန်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်သူအား ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ်ချမှတ်
နှင်းဆီ (UDP) ပါတီ ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟု ချင်နှင်းဆီပါတီပြော
UDP ဥက္ကဌ ဖမ်းဆီးခံရမှုကြောင့် ချင်း UDP လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုမရှိ‌ ဟုဆို
မဲရုံတာ၀န်ကျ နယ်ရပ်ခြားက ပညာရေး၀န်ထမ်းများအတွက် ဟားခါးတွင် ကွာရန်တင်းစင်တာ (၃)ခု စီစဥ်
ဟာခါးတွင် လူစုလူ‌‌‌ေ၀းဖြင့် ၀တ်ပြုအစည်‌‌ေ၀းကျင်းပသူ တရားဟောဆရာနှင့် အိမ်ရှင်ဖမ်းဆီးခံရ
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) တို့၏ မူ၀ဒများသုံးသပ်ခြင်း
ဟာခါးမြို့တွင် ကွာရန်တင်း မ၀င်ချင်လို့ ခရီးသွားရာဇ၀င် ဖုံးကွယ်တဲ့လူတွေရှိနေ
အနိုင်ရပါက ချင်းပြည်နယ် ပညာရေးမြှင့်တင်ရေးကဏ္ဍဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်
ဟားခါး နွယ်ဆည် (Nawi Dam) စီမံကိန်း ကန့်ကွက်စာ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံဆီပို့
ဟားခါးတက္ကသိုလ်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး Comprehensive University ဖြစ်တယ်
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၌ရှိတဲ့ ဟားခါးကော်လိပ်ကို တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တရား၀င်တိုးမြှင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟားခါးတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြားတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့ တမူထူးခြားတဲ့အချက် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မတူညီတဲ့
ရန်ကုန်၊ ရခိုင်နှင့် နိုင်ငံခြားမှ ဟားခါးမြို့ ကို ရောက်ရှိလာသူအားလုံး Swab ယူစစ်ဆေးမည်
ရန်ကုန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် နိုင်ငံခြားမှ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ သို့ ရောက်ရှိလာသူအားလုံးကို Swab ယူစစ်ဆေးဖို့ စီစဥ်ထားကြောင်း ဟားခါးမြို့နယ် မြို့နယ်ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူူးရုံးမှ ကျန်းမာရေးမှူး ဦးဗန်သင်ဟုပ်‌ က
ပလက်၀မြို့နယ်မှာ NLD ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦး စလုံး အနိုင်ရမယ်လို့ယုံပါတယ် – ဦးမျိုးထိုက်
စစ်ပွဲနှင့် စစ်ဘေးရှောင်အရေးကြောင့် အာရုံစိုက်ခံရတဲ့ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်၀မြို့နယ်မှာ NLD ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦး စလုံး ပြန်လည် အနိုင်ရမည်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးထိုက်က
ခရီးသည်မရှိတာကြောင့် ဟာခါးကားဂိတ်တစ်ချို့ ပိတ်ထားရ
COVID-19 ကာလ ခရီးသွား အလွန်နည်းပါးတာကြောင့် ဟားခါး-မန္တလေး-ရန်ကုန်ဖက် သွားတဲ့ ကားဂိတ်တစ်ချို့ ပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။ High Class ကားဂိတ်မှူး ဦးကျဲအိုလွယ်က “စက်တင်ဘာ ၁၁
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း မသန်းစွမ်းသူများအတွက် စံပြုမဲရုံ (၃၇)ခု ထားမည်
လာမယ့် နို၀င်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မသန်းစွမ်းသူများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ မဲထည့်နိုင်ရန် စံပြုမဲရုံ (၃၇)ခု ထားရှိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကောင်မရှင်ထံမှ သိရသည်။ ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကောင်မရှင် ဥဣဌ ဦးအုပ်နော်လ်က
ဆမီးမြို့ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားများကို ညနေပိုင်းတွင် ကျောင်းတက်ခိုင်းဖို့စီစဥ်
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်၀မြို့နယ်၊ ဆမီးမြို့ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားများကို COVID-19 အခြေအနေအရ ဒေသခံကျောင်းသားများနှင့်ခွဲပြီး ညနေပိုင်းတွင် ကျောင်းတက်ခိုင်းဖို့ စီစဥ်ထားကြောင်း သိရသည်။ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားများအတွက် COVID-19 ရန်ပုံငွေကို အသုံးပြုပြီး
ဟားခါးမြို့တွင် ဓါးထိုးမှုဖြစ်ပွားလို့ လူတစ်ဦးသေဆုံး
ယမန်နေ့ည ၁၀ နာရီအချိန်ခန့်က ဟားခါးမြို့သစ်ရပ်ကွပ်တွင် ဓါးထိုးမှုဖြစ်ပွားလို့ လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဟားခါးမြို့သစ်ရပ်ကွပ်တွင် နေထိုင်တဲ့ Bawi Tha Thang နှင့် ဟားခါးထားရ်တွင်နေထိုင်တဲ့ Rechard
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ့တွင် ချင်းပြည်နယ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် NLD ကိုယ်စားလောင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဟားခါးမြို့နယ် (၁) ဦးဇိုဘွေ ( ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁)
ချင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေထဲက အသက်အရွယ်အကြီးဆုံး မျက်မမြင် ဦးလုံကျွယ် (၉၅)နှစ်
CNF/A ထိပ်ပိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တာဝန်မှအနားယူကြောင်းကြေငြာ
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရွာသား (၄)ဦးပျောက်ဆုံး၊ လူတစ်ဦးမိုင်းထိလို့ ဆေးရုံရောက်
ပလက်ဝမြို့တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုင်းနင်းမိလို့ ဆေးရုံတင်ရ
ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ဆမီးက စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦးေသဆုံး၊ (၆)ဦး ဒဏ္ရာရရွိ
ဟားခါးတွင် အမည်မသိလူတစ်ယောက်မှ (၄)နှစ်ကလေးကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဝင်တိုက်ပြီး ထွက်ပြေး
CNJ is the Official Burmese Version of The Chin Journal - Tilim News Agency in Myanmar.
HOME CHIN MYANMAR POLITICS
No. 111, Lung Biakinn Road, Hakha, Chin State
©2021 Chin News Journal.
Made by Salai Zing Bawi